Iimpazamo ezine zeBlogging endifanele ndiziphephe | Martech Zone
Iimpazamo ezine zeBlogging endifanele ndiziphephe
NgoMgqibelo, Julayi 5, 2008 NgoMgqibelo, Novemba 28, 2015 Douglas Karr
Ngale mvakwemini ndichithe iiyure ezimbalwa eBarnes naseNoble. I-Barnes kunye ne-Noble isondele kakhulu ekhayeni lam, kodwa kufuneka ndivume ukuba ii-Border zilunge ngakumbi kwaye iincwadi kulula ukuzifumana. Ndihlala ndihamba ngee-aisles eBarnes naseNoble ejonge kunokuba ndichithe ixesha lokufunda.
Nokuba kunjalo, ndithathe imagazini yam endiyithandayo, Uyilo lweWebhu olusebenzayo (aka .net) kunye ekugqibeleni wachola Darren kwaye Chrisincwadi, Iimfihlo zokuBhloga indlela yakho kwiNgeniso yeMifanekiso emithandathu.
Andicingi ukuba isihloko sencwadi siyakwenza okusesikweni. Nangona uninzi lwencwadi lumalunga nokwenza imali kunye nempumelelo kaDarren kuyo, ingcebiso yencwadi idlulela ngaphaya koko. Ndingayincoma kuye nakubani na ovela kwisikhokelo sesicwangciso sokubloga ngokunjalo. Yahlukile kwezinye iincwadi zam endizithandayo kubhloga, njenge Shel kwaye Scoble's ncwadi, Incoko ezihamba ze, ekubeni icebo ngakumbi kwindlela yalo kunokuba nesicwangciso. Le yincwadi ukuze uqalise ukubhloga ngempumelelo.
Incwadi iqinise uninzi lweendlela kunye namaqhinga endithe ndathetha ngawo kule bhlog, kodwa kuya kufuneka ndibelane nawe ngezona mpazamo zibalaseleyo kubhloga kwam:
Ukubhloga kwam akusoloko kungqinelana ngenxa yeshedyuli yomsebenzi wam. Oku kubuhlungu umfutho wam kuba abafundi abahlali beqinisekisiwe ngomxholo osemgangathweni ngosuku ngalunye.
Indawo yam ibhalwe uphawu ngakumbi kum kuneTekhnoloji yeNtengiso kwaye uninzi lwezithuba zam zabelana ngee-anecdotes zobuqu ezinokuthi zingabinanto yakwenza neTekhnoloji yeNtengiso. Abafundi bam baye bakulindela oko kum, kodwa ndiyazi ukuba abafundi abaninzi baye bahamba ngenxa yayo.
Ibhlog yam inokuchongwa ibe yimixholo emininzi ejolise ngakumbi… mhlawumbi ukuThengiswa kwe-Intanethi, iMidiya yokuSebenza, kunye noPhuhliso lweWebhu. Ndisenokusebenza ngolunye usuku ukuba ndidayise umxholo, kodwa ngumsebenzi onzima (onzima kakhulu). Ukuba bendizakuqala phantsi, ngokuqinisekileyo lolwalathiso ngendiye ndaluthatha.
Igama lam lesizinda aliyi kuba dknewmedia.com. Kwakhona, oku kuphazamisa iblogi phakathi kwam kunye nesihloko sam. Ikwenza ukuba ibhlog yakho ingathengiswa, kuba andifuni kuthengisa igama lam. Ndigcina iliso kwezinye iindawo, nangona kunjalo! Ukuba ndinokufumana ezilungileyo, ndiza kujonga ukwahlula umxholo wam kwaye ndingayinxibelelanisi ibhlog yam negama lam.
Ndijonge phambili ekuphenduleni kukaChris noDarren kwesi sithuba. Ukuba awubhengezi okwangoku, qiniseka ukuba uyayithatha incwadi kaDarren kunye neChris ukuze uqalise kumkhondo olungileyo. Kumnandi ukufunda!
tags: UhlalutyocreativeUmbono wokuqalazidibeneyointengiso ehlanganisiweyoIsisombululo seNtengiso seSchaefer
Ividiyo yam kaJulayi 4
Idomain Itshintshelwe kwiNtengisotechblog.com
Jul 6, 2008 ngo-5: 41 PM
Enkosi ngengcebiso. Ngokuqinisekileyo ndiza kuyijonga.
Ngeli xesha, isisombululo sam # 3 yayikukudala iibhloko ezahlukeneyo ngezihloko ezahlukeneyo. Ngelixa indivumela ukuba ndigxile ekubhaleni kwam kubaphulaphuli abathile, ngamanye amaxesha kuyadinisa ukuzama ukuvelisa umxholo omtsha.
Ndingathanda ukuva izimvo zabanye. ukwahlula iiblogi, okanye umngcipheko wokuhlukanisa abanye babafundi bakho?
Jul 7, 2008 ngo-9: 33 AM
Ukwahlula umxholo kwiiblogi ezijolise kuzo kunezibonelelo ezininzi, kokubini kulindelo lwabafundi bakho kunye nokugxila kumagama aphambili kwiinjini yokukhangela. Akukho sizathu sokuba umntu angabinakho ukubhalisela iibhlog zakho nganye, ndicinga ukuba yeyona ndlela yokuhamba!
Jul 6, 2008 ngo-10: 47 PM
Ndingacinga ukuba ukwahlula umxholo kwibhlog enye kuya kuba yindlela eya endaweni yeebhloko ezintathu okanye ezine ezahlukeneyo. Ndicinga ukuba unalo ixesha lokuhlaziya iibhloko kunokuba lula.
Iposi elungileyo Doug.
Jul 8, 2008 ngo-6: 21 AM
Enkosi ngokukhankanywa kwencwadi 🙂 Nokuba ibhalwe njani ibhlog, ilizwi elingasemva kwayo lihlala liyinto ebalulekileyo ke nceda ungalahli incasa ka “Douglas”
Jul 10, 2008 ngo-8: 40 PM
Enkosi Chris! Hayi - uDoug akazukulahleka kule bhlog nangaliphi na ixesha kungekudala ndiyathembisa… ngaphandle kokuba imali iza phakathi kwebhlog kunye nam 😉
Inqaku elinomdla koku, zingaphelanga iintsuku zokutshintsha igama lam lesizinda, ndiye ndaya # 2 kuGoogle ndaya kwi # 1 yeTekhnoloji yeNtengiso yeTekhnoloji ke kukho into kule nto yeSEO.
Yenza isifundo esifanelekileyo sokukhetha igama lakho lesizinda!
Agasti 5, 2008 kwi-9: 33 AM
I-Gee whiz. Ulibale ngencwadi yakhe uyibonile le bhlog yabantu. Enkosi iintloko phezulu.